Indlu esemaphandleni yesintu yaseIreland eGortahork, eDonegal - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yesintu yaseIreland eGortahork, eDonegal
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguIona
I-93% yeendwendwe zakutshanje inike uIona iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le yindlu esemaphandleni elula kodwa entofontofo eNorth West Donegal, emalunga neemayile eziyi-1,5 ukusuka kwidolophana yaseGortahork, kwindlu esemaphandleni eyenziwe ngamatye.
Ime embindini weGaeltacht (indawo ethetha isiIrish), kwindawo epholileyo, kude nesiphithiphithi sobomi bemihla ngemihla. Yindawo yokwenyani yokubalekela kwindawo entle, enokuthula.
Le ndlu ikumgangatho omabini, inamagumbi okulala aphezulu kunye negumbi lokuhlala elitofotofo elisezantsi elinomlilo ovuliweyo, ikhitshi elinendawo yokutyela encinci, negumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlamba neshawa. Ishawa ayinamvume yokungena. Le ndlu inento eyenza kufudumale.
Zonke izinto zebhedi neetawuli ziyafumaneka. Ikhitshi linefenitshala epheleleyo. Ikhothi yokuhamba kunye nesitulo sokutyisela usana ziyafumaneka xa kucelwa.
Le ndlu isemaphandleni ibalungele abantwana abancinci, kodwa nceda uqinisekise ukuba bayanyamekelwa ngalo lonke ixesha ngaphandle. Kubalulekile ukuqaphela ukuba kukho umjelo obaleka uye ngaphambili nasemacaleni endlwana (kumantla nasempuma) kwaye abantwana abamele bazulazule ngaphandle kwendlu esemaphandleni bengakhange balawule.
Le ndlu ikwindawo entle ibe yindawo entle kakhulu yokubuka iDonegal. Iidolophu ezikufutshane ziquka iFalcarragh, iDunfanaghy, iDungloe neGweedore kunye neWild Atlantic Way. Ilungile into yokufikelela kwiGetkenny.
Umbuki zindwendwe ngu- Iona
Ndiza kuhlala ndinxibelelana nawe ngexesha lokuhlala kwakho kwaye usapho lwam luza kuba khona ukuze ludibane nawe xa lubhalisela ukufika luze lukufake endlini.